Maxaa la gudboon DF kadib warbixintii QM ee ceebeysay xulufada Sacuudiga? | Entertainment and News Site
Home » bulshada » News » Maxaa la gudboon DF kadib warbixintii QM ee ceebeysay xulufada Sacuudiga?
Maxaa la gudboon DF kadib warbixintii QM ee ceebeysay xulufada Sacuudiga?
daajis.com:- Baarayaasha QM ayaa ku eedeeyey isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo inay ka dambeeyeen weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday Soomaali saarneyd doon ku socotay xeebaha dalka Yemen, bishii march ee sanadkan.
Haddaba Waxaa is waydiin mudan maxaa la gudboon dowladda Federaalk Soomaaliya kadib warbixintii Qaramada Midoobay ee lagu sheegay inay Dowladda Sacuuciga ka dambeyso arirntaan.
Sida uu qabo shaciga caalamiga ah, dowladda Soomaaliya ayaa xaq u leh inay dowladda Sacuudiga ka dalbato raali gelin deg deg ah inay ka bixiso falkaas guracan ee lagu laayey muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed.
Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay si deg deg ah dalka Sacuudiga uga dalbato inay magdhow ka bixiso dadkii la laayey oo gaarayo 42 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah.
Dowladda Sacuudiga iyo xulafadeeda ayaa inkiray inay arrintaan ka dambeeyaan, waxaana dacwad ka dhan ah arrintaas loo gudbiyey qaramada Midoobay oo ugu dambeyn ka dhawaajisay inay falkaas ka dambeeyaan xulafada Sacuudiga.
Waxaa laga war sugayaa jawaabta ay dowladda Soomaaliya ka bixiso warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ee lagu sheegay inay sacuudiga ka dambeyso falkaan.
Waraysi: Hoboladii Khadiijo Qalanjo oo Wiilkeedu ku xidhan yahay London UK
Katrina Kaif oo ka gaabsatay in ka jawaabto sababtii Salman khan lagu casuumi waayay arooskii walaasheed